🥇Ii-Akhawunti eziBalaseleyo zeDemo yeJanuwari kaJanuwari 2022 | Isikhokelo sabaQalayo
Eyona Akhawunti ye-Demo ye-Forex ye-2022- Isikhokelo sabaQalayo esipheleleyo
Thankfully for traders, forex demo accounts allow you to try out various aspects of the forex trading markets without actually having to deposit your own hard-earned cash. Ezinye zeempawu onokuzithatha kuvavanyo lokuqhuba luhlalutyo lobuchwephesha, amandla, ukuthenga kunye nokuthengisa iiodolo, kunye neerobhothi ezizenzekelayo ezisebenza egameni lakho.
Kufana nomboniso wezandla ezibonakalayo zentengiso yokwenyani ye-forex kwaye uziva ngathi. Uya kuthengisa ngababini bemali, kwaye uphonononge lonke uhlalutyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zetshathi ezinokuthi zifumaneke kuwe ngeakhawunti eqhelekileyo ye-forex yorhwebo.
Elona candelo lilungileyo malunga nalo kukuba awunyanzelekanga ukuba uthathe umngcipheko xa uthatha isigqibo sokuthenga okanye ukuthengisa. Kananjalo, nokuba ungumrhwebi onamava okanye intwana ye-novice, uyakwazi ukuphinda-phinda iimeko zehlabathi lokwenyani ngaphandle komngcipheko oqhotyoshelweyo.
Kule Akhawunti ye-Demo ye-Forex yeDemo ye-2021- Isikhokelo sabaQala abaGcweleyo, siza kunika iinkcukacha ngayo yonke into ekufuneka siyazi malunga neeakhawunti zedemo ye-forex- kubandakanya indlela yokuqalisa, iinzuzo kunye neengozi, kunye neendlela zokurhweba ngeakhawunti.
Yintoni iAkhawunti yeDemo ye-Forex?
Ngokufanelekileyo, ezona akhawunti zibalaseleyo zeedemo zivumela abahwebi ukuba bathenge kwaye bathengise izixhobo zemali, konke ngaphandle kokufaka idenariyo enye. Kwiimeko ezininzi, xa uvula iakhawunti ngefemu yomrhwebi okwi-intanethi, uya kuba nakho ukurhweba ngemali yeakhawunti yeedemo (oko kukuthi, ewe, awusebenzisi nayiphi na imali yakho yokwenyani).
Eyona njongo iphambili yeakhawunti yeedemo kukukwenza ukuba uzame iimeko zobomi bokwenyani, konke ngaphandle kokubeka emngciphekweni into njengoko kungekho dipozithi iyimfuneko ukuze uqalise. Njengoko sele kuphawuliwe, uhlala ucelwa ukuba usebenzise umthengisi we-intanethi kwi-Intanethi ukuze uqalise ngeakhawunti yedemo. Ngokwenza oku, kuya kufuneka ube nokufikelela kwangoko kwiimarike ze-forex zehlabathi ngalo mthengisi othile.
Ngamanye amaxesha, iakhawunti yedemo iya kwenziwa ifumaneke kuwe ngeqonga lokurhweba nge-desktop njenge-MT5 okanye MT4. Ngamanye amaxesha iya kufikeleleka kuwe nge-browser yakho. Iakhawunti yakho yeedemo ye-forex ihlala ibonisa oko kwenzekayo kwiimarike zokwenyani zemali- oko kuthetha ukuba uza kuthengisa ngeemeko zokuphila. Mnaf iakhawunti yedemo ayinikezeli ngale nto kufuneka ujonge elinye iqonga njengoko ungazukufumana zibonelelo zizeleyo.
Iinkonzo kunye neengozi zeAkhawunti zeDemo ze-Forex
Awudingi ukufaka nantoni na ukuze usebenzise iakhawunti yedemo
Yindlela efanelekileyo yokuvavanya iindlela zakho zokurhweba
Ukuqonda ukuba zisebenza njani izalathi zobugcisa
Funda ukusebenzisa i urhwebo lwemoto isixokelelwano
Ukuvavanya abanikezeli beenkonzo ngaphandle
Ilungele ukufunda malunga yorhwebo ntengiso indawo
Kulula ukuqhutywa uthabathe umngcipheko omkhulu onokuthi ungawuthathi ngokurhweba
Kuphantse kube nzima ukufumana naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga xa ulahlekelwa okanye uphumelela imali
Zeziphi iiAkhawunti zeDemo eziMnandi ezinokuthi zisetyenziselwe?
Nangona ekuboneni kokuqala kunokubonakala ngathi iiakhawunti zedemo zezabaqalayo, oku akunjalo. Ewe, ii-newbies zinokusebenzisa iakhawunti yedemo ekufundeni iintambo ze-forex. Kodwa zikwayindlela entle yokuba nabathengisi abanamava avavanye iinkqubo ezahlukeneyo zokurhweba kunye neendlela ezahlukeneyo- konke ngaphandle kokubeka esichengeni imbiza yakho yokwenene yemali.
Iqela lethu leengcali libeke ndawonye uluhlu lwezizathu zokuba sicinga ukuba ezona akhawunti zeedemo ze-forex zixabisa ixesha lakho kunye nokuqwalaselwa.
Nangona iiakhawunti zedemo zezomntu wonke, kuye kuthiwe kukho izibonelelo ezibonakalayo kwi-newbie. Ngokusisiseko, kunokuba yindlela elungileyo yokufunda ukusebenza kwangaphakathi kunye noomatshini beemali zentengiso. Nokuba awuzange ubeke ukuthengisa okanye ukuthenga i-odolo ngaphambili kwaye ungazi ukuba ungaqala ngaphi, ungazama ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali eyinkunzi.
Ukuqonda iiMiyalelo zeNtengiso
Enye yezinto zokuqala ukukhankanya apha kukuba ukusebenzisa iakhawunti yedemo kuya kukunika ukuqonda okungcono ngakumbi malunga nendlela yee-odolo zentengiso ezisebenza ngayo.
Eminye yee-odolo eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwiimarike zorhwebo lwe-forex zezi:
Ukuyeka ukulahleka kwee-odolo
Thatha imiyalelo yenzuzo
Zonke ezi zi-odolo ezenza ukuba umthengisi wakho we-forex aqonde ukuba ufuna ukwenza ntoni kwaye yintoni inyathelo lakho elilandelayo. Ewe kunjalo, xa usebenzisa ezona akhawunti zeedemo ze-forex, uyakwazi ukufumana ukuqonda okukuko malunga nendlela ezi odolo zentengiso ezisebenza ngayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, uya kuyenza le nto ngaphandle komngcipheko wokwenza impazamo ebiza imali.
Ukuhlalutya amaxabiso okuhamba
Xa ufika kwinqanaba apho uqonda kakuhle ii-odolo zentengiso kunye nendlela abasebenza ngayo kurhwebo lwe-forex, emva koko ungaya ekufundeni imeko zentengiso. Ngokuhlalutya ezi ndlela zokuhamba kwamaxabiso, uyakwazi ukufumana inani elifanelekileyo lolwazi ngendlela izixhobo zemali ezihamba ngayo ngaphakathi kwintengiso.
Amaqhinga okuLawula umngcipheko
Ukukhusela iiodolo zakho kwiintshukumo ezimbi ezenzeka kwintengiso kubaluleke kakhulu. Esinye sezizathu zokuba ukusebenzisa iakhawunti yedemo ye-forex kuluncedo kakhulu kukuba iyakwenza ukuba ucoce izicwangciso zakho zolawulo lomngcipheko. Oku kunokukugcinela uxinzelelo olunzima kwixesha elizayo.
Ukuba uyakutyeshela ukuzifundisa ngeendlela ezifanelekileyo zokulawula umngcipheko, kunokwenzeka ukuba ufumane ilahleko ezininzi ekuhambeni kwexesha.
Sicinga ukuba ukuqonda sasaza Kubaluleke kakhulu njengoko kunokuchaphazela kakhulu amandla akho okwenza inzuzo ngokurhweba kwangaphambili. Kananjalo, ukuba useyinto encinci yomqali xa kufikwa ekusasazekeni, ngokuqinisekileyo uya kuzuza ngokusebenzisa iakhawunti yedemo ye-forex.
Enye yeendlela ezilungileyo zokufunda ngakumbi malunga nendlela owusasaza ngayo umsebenzi kukusebenzisa ngokupheleleyo iakhawunti yakho yedemo njengoko oku kuya kubonisa ukuhla kwamaxabiso ngalo lonke usuku lokurhweba, nakwixesha lokwenyani, kananjalo.
Uninzi lwabathengisi abanamava basebenzisa izixhobo zokuxhobisa ngokupheleleyo, njengoko iyindlela efanelekileyo yokunyusa imali yorhwebo. Ewe izinto ezininzi ebomini zinokuchasana kunye nokufumana amandla, oku kunokuthetha ukuba endaweni yokunyusa isikhundla sakho inokuhamba ngenye indlela kwaye inyuse ilahleko yakho.
Kungenxa yoku sinokuthi sicebise ukuba sifunde ukungena nokuphuma kwesixokelelwano ngeakhawunti yedemo ngaphambi kokwenza oku ngeemali zehlabathi zokwenyani. Ngale ndlela, uyakwazi ukubona okuhle, okubi nokubi xa kusenziwa urhwebo kumda.
Ngokwenza njalo, uya kufumana ukuqonda okungcono malunga nokuba yeyiphi na into, kwaye uyayiqonda loo nto kwaye iyanceda kwaye inokuhamba gwenxa.
Iiakhawunti zedemo ziyakhanya ngokwenene xa kufikwa kulingo ngabathengisi be-forex abatsha. Kungenxa yokuba ngokususa isidingo sokufaka nayiphi na imali, unokubona ukuba iqonga lokurhweba lisebenza njani kwindawo yentengiso ephilayo.
Nje ukuba wonwabe ngeziphumo zedemo ye-forex, ungaqhubeka nokuvula iakhawunti esemgangathweni kunye nomthengisi omkhethileyo. Ewe kunjalo, asizukucebisa ukuba wenze loo nto ngoko nangoko, njengoko kufuneka kuqala uqiniseke ukuba uyayazi ngokuqinisekileyo indlela ezisebenza ngayo iimarike ze-forex.
Ukufunda iintambo zentengiso ye-forex kubandakanya uhlalutyo lobuchwephesha, iitshathi kwaye ikakhulu- 'ukufunda ngokwenza'. Ukuzifundisa ngeendlela ezahlukeneyo zohlalutyo lobuchwephesha kuya kukunika ithuba elingcono kakhulu lokuphumelela kumashishini akho e-intanethi.
Ngokucacileyo, uhlalutyo lobugcisa yindlela yokufunda iitshathi ze-forex. Eyona nto iphambili ekufundeni ngembali kunye nexabiso langoku lexabiso ukuze uqikelele apho imeko yexabiso inokuhamba khona kwixesha elizayo.
Izikhombisi zobuGcisa zihlala ziwela kwelinye lala macandelo alandelayo:
Ii-Oscillators: Isetyenziswe xa kungekho mkhuba womeleleyo kwiimarike ezahlukeneyo. Sisalathiso esiphikisayo, ngokuthetha.
Iimpawu zikaBill Williams: Umhlalutyi weemarike kunye nomrhwebi oqulunqe izikhombisi kunye nezicwangciso zobuchwephesha. Ezi zikhombisi zihlala zikhona ii-oscillators ngokunjalo.
Iimpawu zeNdlela: TIqwalaselwa zii-algorithms zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuhambaS (i-100-yeentsuku, iintsuku ezingama-50, njl.
Izikhombisi zeVolumu: Ukwenza i-akhawunti yevolumu, inani lotshintsho lwamaxabiso ngexesha elichazwe kwangaphambili.
Iimpawu zesitishi - Ngokwesiqhelo kubandakanya ijelo lexabiso eliphezulu kunye nejelo lamaxabiso asezantsi, kunye nokujonga imeko.
Zimbalwa nje izikhombisi eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zezi:
IiBollinger Bands - iindlela ezigwenxa nezintle.
RSI - Isalathiso samandla esalamane yi-oscillator eyaziwayo
Stochastics - enye i-oscillator eyaziwayo kakhulu
I-Oscillator eyoyikekayo- ise-oscillator, kodwa isalathiso sikaBill Williams.
Ukubuyiswa kweFibonacci - le ibonisa apho ukuxhathisa kunye nenkxaso kuqikelelwe ukuba kwenzeke.
MACD - Isifinyezo se Ukuhambisa iAverver Convergence Divergence, ebonisa imilinganiselo emibini ehambayo.
CCI - I-aka Commodity Channel Index, sisalathiso esithandwayo esetyenziselwa ukubona indawo egcinwe ngaphezulu kunye nokuthengisa (kakhulu njengeStochastics kunye neRSI)
Kuyacetyiswa ukuba usebenzise isibonisi esingaphezulu kwesinye sobuchwephesha ukuze ungene kwizakhono zokufunda kwitshathi. Ngokusesikweni, akukho ndlela ibhetele yokufumana ukuqonda koku kunokusebenzisa iakhawunti yedemo ye-forex ukuziqhelanisa simahla-oko kuthetha ukuba awudingi ukubeka emngciphekweni ipeni enye.
Amaqhinga amatsha oRhwebo
Nokuba abathengisi abanamava nabanobuchule basebenzise iiakhawunti zedemo. Iimarike zezemali ziindawo ezihlala zitshintsha, ke kusengqiqweni ukusebenzisa iakhawunti yedemo ukwenza ezinye iindlela zokurhweba. Ngamanye amagama, into esebenzayo kwinyanga ephelileyo ayinakusebenza nanamhlanje, ke kuyavakala ukuba uhlale inyathelo elinye phambi kwabathengisi bakho!
Kunokubakho ixesha apho ufuna ukuzama into entsha ngendlela engathandekiyo. Kwakhona, oku kwenza ukuba iiakhawunti zedemo ye-forex zibaluleke kakhulu.
Njengomrhwebi, kungafika ixesha apho isicwangciso esithile singasebenziyo ngendlela ocinga ngayo. Kodwa, ngokuvavanya oku ngeakhawunti yedemo, uyakwazi ukwenza utshintsho kunye nokuphuculwa kwendlela. Kwaye xa uziva ngathi iqhinga lakho linjalo ngempela Ukuhlawula kwaye uye ekucwangciseni, emva koko unokukubeka kwisenzo kwiakhawunti yokwenyani yokurhweba ngaphambili kwaye uyonwabele inzuzo.
Uvavanyo lweMpawu zoRhwebo
Iimpawu ziya zisanda ngakumbi kwindawo yokurhweba nge-intanethi. Ngokwesiqhelo le yingcebiso yokungenisa urhwebo ngexesha elithile okanye kwixabiso elithile, kwibala elithile lemali. Lo mqondiso uyakwenziwa nokuba irobhothi ye-forex okanye umhlalutyi wokwenene ongumntu.
Nangona kunokubakho intlawulo encinci efunekayo yokufumana inkonzo yomqondiso, iakhawunti yedemo ngokuqinisekileyo iya kukuvumela ukuba ukuvavanye oku. Imiqondiso yakho ingasetyenziselwa kwiakhawunti yedemo ngokudibeneyo namanye amacebo e-forex kunye neenkqubo ngaphambi kokuthatha umngcipheko wokuzibophelela kwexesha elide.
Enye yezona zinto ziluncedo kakhulu malunga neakhawunti yedemo ye-forex kukuba unokuzama inkonzo yomqondiso ngaphandle kokukhathazeka ngokulahleka itoni yemali kwinkqubo. Nje ukuba ulugqibe uhlalutyo lwakho, unokucinga malunga nokuba ngaba ucinga ukuba imiqondiso iya kuba sisisombululo sexesha elide. Ukuba uthatha isigqibo sokuba ayizizo, ababoneleli abathembekileyo baya kukubonelela ngembuyekezo epheleleyo.
Iinkqubo zokuThengisa ngokuzenzekelayo
Ezinye iiakhawunti zedemo ye-forex ziya kukuvumela ukuba uzame iinkqubo zokurhweba ezinje ngabacebisi ngeengcali (ii-EAs zeak) okanye iirobhothi zangaphambili.
Into elungileyo ukuyenza kukufumana umthengisi we-intanethi okwi-intanethi ekuvumela ukuba ufikelele kwi-MT4 okanye kwi-MT4. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukuvula iakhawunti yedemo ye-forex kwindawo yomthengisi kwaye ukhuphele isoftware ngqo kwisixhobo sakho. Okwangoku, kuya kufuneka unxibelelanise isoftware yakho yokurhweba kwi-robot ye-forex, njengoko oku kuvumela isoftware ezenzekelayo ukuba ikwazi ukuthengisa endaweni yakho.
Ewe kunjalo, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule apha kukuba usebenzisa iakhawunti yedemo ephilayo ukuthengisa. Kananjalo, ayenzi mahluko kuwe ukuba irobhothi ezenzekelayo ikwenza itoni yemali okanye hayi. Ukuba wonwabile ngumsebenzi owenziwe ziirobhothi zangaphambili ezizenzekelayo egameni lakho, ungasoloko uziphosa kwaye udlulele kwiakhawunti yobomi bokwenyani ye-forex.
Icala elisezantsi kwii-Akhawunti zeDemo ze-Forex
Kufuneka kuthiwe kukho inani lemingxunya xa kufikwa kwiakhawunti yeedemo ze-forex. Eyona nto iphambili koku kukuba kunokuba lula kuwe ukuba uthathe uhambo ngokuthatha umngcipheko owongezelelekileyo (ukwazi ukuba ayizukubiza). Ke inokukunika umbono ongeyonyani wethemba xa kufikwa kurhwebo ngemali yokwenyani.
Umzekelo, unokuba nepesenti yokubuyela ye-50% emva kokusebenzisa iakhawunti yedemo yasimahla ngenani leentsuku okanye iiveki kwaye ucinge ukuba ukurhweba kulula. Eyona nto imbi onokuyenza njengomrhwebi ongenamava iqhutywa kumthengisi wakho we-forex, ubeke imali kwiakhawunti yakho yorhwebo, kwaye uqale urhwebo lokwenyani, ngemali yokwenyani.
Ngelishwa, ngenxa yokuba urhwebo lwe-forex lunokubonakala ngathi lulula kakhulu kwiakhawunti yedemo, oku akusoloko kuthetha ukuba kuya kuba kwintengiso yobomi bokwenyani. Iziphumo zokukuthatha kancinci kunokuba kubi kwimali eseleyo kwibhanki yakho.
Ekugqibeleni, iiakhawunti zedemo ye-forex zinokukukhokelela ekubeni uthathe umngcipheko omkhulu kunokuba ubuya kuyenza ngemali yakho. Ukuziva ungenamngcipheko kunokukuthomalalisa kwimeko yokhuseleko, kwaye mhlawumbi kuyenze ibonakale ilula ngokukhohlisa.
Oku kwehla kwinto eyaziwa ngokuba yi 'forex yorhwebo ngengqondo'. oku kubhekisa kwezona mvakalelo zixhaphakileyo ziboniswa ngabarhwebi xa besenza izigqibo ezibalulekileyo kwintengiso.
Ezi mvakalelo zintathu zilandelayo:
Uloyiko / imithambo-luvo: Tmkhulu umngcipheko, kokukhona unethuba elingakumbi lokwenza ngenxa yoloyiko. Oku kunokukhokelela ekubeni uthathe umngcipheko omkhulu wokuchasa impazamo yakho.
Ukubawa / ikratshi: Ukuba uziva ngathi unomdla kuphela kuthengiso olukhulu, okanye uziva ngathi ubungozi obukhulu bulifanele ixesha lakho, kukho ithuba eliphezulu lokuba ungabawa. Endaweni yoko, kuya kufuneka ujonge ukurhweba kwangaphambili njengohambo lwexesha elide.
Imincili / isigwebo: Abahwebi baziva le mvakalelo ngalo lonke ixesha bengena kurhwebo. Kuqhelekile kwaye ungalondla kolu lonwabo ngendlela yokuqiniseka kwisinyathelo sokugqibela sokurhweba.
Ukuzithemba okuza nokubawa kunokuba yinto elungileyo kurhwebo, kodwa kunokwenza ukuba umrhwebi azikhukhumeze. Oku kungakhokelela kwizakhono zokuthatha izigqibo xa usenza urhwebo nge-forex. Uninzi lwabarhwebi luya kufumana ilahleko ngaxa lithile- nokuba ziiveki ezibomvu okanye zikwimeko embi nje rhoqo.
Abarhwebi abanamava bahlala belazi ixesha lokusika ilahleko yabo kwaye bafunde kwiimpazamo ezidlulileyo ngaphambi kokuba baqhubeke. Ingxaki kukuba abathengisi abangenawo amava bahlala bethatha izigqibo ezinobungozi kwaye baphela bezitshisa.
Abarhwebi abangakhathaliyo abaphulukana nomkhondo weendlela zabo zolawulo lomngcipheko kwaye abazisebenzisi izixhobo ezifanelekileyo zohlalutyo lobuchwephesha kungekudala banokuyiphelisa loo nzuzo inesigqibo esinye esibi. Kananjalo, teyona nto iphambili ekufuneka uyikhumbule kukuba ukusebenzisa iakhawunti yedemo kuthetha ukuba awufumani icala lokwenyani lamava orhwebo.
Kuya kubakho ukuzuza kunye nelahleko kwiakhawunti yakho yedemo, kodwa ngokuqinisekileyo ngekhe ubenemvakalelo efanayo njengoko ubuya kwenza kwihlabathi lokwenyani, ngemali yokwenyani. Ekugqibeleni, abaninzi banokuphikisa ukuba unokuqonda kuphela ukuthengisa i-phycology xa sele urhweba ngemali yakho.
Uyikhetha njani iAkhawunti yeDemo ye-Forex
Kuya kufuneka ngoku uphelele kwiluphu xa kuziwa kwiingenelo kunye neengozi zokusebenzisa iakhawunti yedemo ye-forex. Kananjalo, kuya kufuneka ulungele ukucinga ngokukhetha iqonga.
Ukuthatha ingqalelo yokuba umrhwebi ngamnye uya kwahluka kancinane, sidibanise uluhlu lwezinto ekufuneka sizithathele ingqalelo xa ukhangela eyona akhawunti yeedemo ye-forex.
Khetha iBroker oyilindeleyo ukuba uyisebenzise
Kungathathelwa ingqalelo njengokuzenzela into encinci ukuchitha ukuvavanya iiveki kunye nokujonga umrhwebi othile we-forex (usebenzisa iakhawunti yakho yedemo), kuphela ukutshintsha abathengisi xa kufikwa kurhwebo ngemali yokwenyani. Isizathu sokuba ungayifumana le nto ingeloncedo kukuba umrhwebi omtsha we-forex angavela asebenzise ishishini lakhe ngendlela eyahluke ngokupheleleyo ukuya ekugqibeleni, kwaye ke mhlawumbi unokukufumanisa kungathandeki ngendlela othanda ngayo ukuthengisa.
Ngesi sizathu, siyacebisa ukuvula iakhawunti yeedemo ngomthengisi okwi-Intanethi onokuzibona usebenzisa kuyo kwixa elizayo. Emva kwayo yonke loo nto, xa urhweba ngeakhawunti ye-demo ye-akhawunti yakho, iimeko zentengiso yokwenyani ziya kuthelekiswa.
Unokufumanisa ukuba isibini semali sisasazeka ngokwahlukileyo phakathi kwabarhwebi abohlukeneyo. Umzekelo, umthengisi weakhawunti yakho yedemo unokubonelela ngokusasazeka kwe-0.7 iipipi kwi-USD / GBP, ngelixa umrhwebi owahlukileyo we-forex enokutshaja isixa esiphezulu kwii-1.2 iipips. Kananjalo, kungcono ukuba ungazenzi nzima izinto kwaye unamathele kwi-forex broker ukuba uyonwabele iakhawunti yedemo kwiqonga labo elithile.
Iimeko zeNtengiso yeHlabathi yoNene
Njengoko sichukumise apha ngasentla, ezona akhawunti zeedemo ze-forex ziya kukubonelela ngendawo yokwenene yentengiso. Ngaphandle koko, akukho ngongoma ininzi kwidemo.
Ezi meko zentengiso yokwenene ziyinxalenye enkulu yokufunda malunga nokuthengisa kwangaphambili kunye nokwakha kwizakhono zakho njengomrhwebi ophumeleleyo.
Isibonelelo seXesha leXesha lokuLinga
Xa ufumana umrhwebi, soloko ujonga kubo ukuba uza kuba nakho ukufikelela ixesha elingakanani kwiakhawunti yakho yedemo. Kungenxa yokuba abanye abathengisi banokuvumela kuphela umcimbi weentsuku, ezinye iiveki.
Ukuze ufumane ukuqonda okufanelekileyo ngokurhweba kwangaphambili, sicinga ukuba uyakufuna ubuncinci inyanga ukwakha ulwazi lwakho lokuthengisa, kunye nokuzithemba kwakho ekuqondeni iimarike.
Ibali yeAkhawunti yokuQala ibhalansi
Yikholwe okanye ungakholelwa, nditsho neeakhawunti zedemo ziza nemida. Iakhawunti nganye yedemo iya kwahluka malunga noku, ke kuhlala kulungile ukujonga olu lwazi ngaphambi kokuba ubhalise. Ezinye zeakhawunti zeedemo ze-forex ezilungileyo ziza nebhalansi yokuqala engaphezulu kwe- $ 100,000.
Ngokukhawuleza ukuba ugqume iziseko, ungaqala ukujonga ukuba zeziphi izixhobo oza kuba nokufikelela kuzo ngeakhawunti oyikhethileyo. Emva koko, ezo zixhobo ziyinxalenye ebalulekileyo yokuvavanya izicwangciso zorhwebo ezixoxwe ngaphambili ngaphambi kokuba ziphile.
Nangona ubhalisela iakhawunti yeedemo, kuya kufuneka uqaphele ukuba abanye abathengisi be-intanethi abakwi-Intanethi phaya ngaphandle bazokucela iinkcukacha zakho zokuhlawula. Isizathu soku kukunqanda abantu ukuba bangasebenzisi gwenxa idemo yasimahla ngokuvula iiakhawunti ezininzi.
Ingcebiso yethu ethembekileyo koku? Singacebisa ukuba ukhethe iakhawunti yeedemo engazifuni ezo nkcukacha zekhadi. Uluvo olupheleleyo lokuqalisa ngesiboniso luziva ukhuselekile ukuba awunabungozi kwaye awuyichazanga nayiphi na imali oyisebenzele nzima.
Ayisiyiyo into yokuba sicinga ukuba umrhwebi uza kuthatha imali yakho engakhange abuze, kodwa siyazi ukuba ukuzama iakhawunti ye-demo ye-forex ayisiyonto imfuneko yokuba ukhuphe ulwazi lwakho lokuhlawula, ngakumbi kweli nqanaba lokuqala.
Ukuqalisa ngeAkhawunti yeDemo ye-Forex
Ukuba ungumrhwebi, nokuba unamava okanye akunjalo, usenokuzibuza ukuba ungaqala njani ngeakhawunti yedemo? Ewe, kweli candelo lesona sikhokelo se-akhawunti yethu ye-demo yesikhokelo, sidibanise inkqubo yamanyathelo ama-5 yokuba ungaqala njani namhlanje!
Inyathelo 1-Ukukhetha uMthengisi we Forex
Kuya kufuneka uqale ngokuchonga umrhwebi okwi-Intanethi onika abathengisi ukhetho lweakhawunti yedemo. Njengoko besichukumisile ngaphambili, sicinga ukuba kungcono ukubhalisela umrhwebi onokuzibona kamva ukuba ufuna ukusebenzisa imali yokwenyani kamva ezantsi emgceni.
Nantsi eminye imibuzo ekufuneka uzibuze yona ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela:
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo kum?
Ngaba lo broker unemvume yokulawula?
Zeziphi iiasethi endiza kukwazi ukuzithengisa?
Xa kuziwa kwiikhomishini, ukusasazeka kunye nemirhumo- ngaba lo broker unokhuphiswano?
Ngaba inkxaso kubathengi yebroker ilungile njengoko inokuba njalo? (sihlala sicebisa ukujonga uphononongo lwethu lolu hlobo lwento)
Ngaba i-MT4 kunye neMT5 zixhaswa ngumrhwebi? (Oku kubaluleke ngakumbi kurhwebo oluzenzekelayo)
Inyathelo 2 -Vula iAkhawunti yeDemo ye-Forex
Ngoku uyenzile le nto, kuya kufuneka uye phambili kwaye uvule iakhawunti. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, oku kukuyekisa abantu ekubeni basebenzise kwaye bavule ngaphezulu kweakhawunti yeedemo kunye nomthengisi ofanayo kwi-Intanethi.
Uya kudinga ukufaka ulwazi malunga nawe kule ndawo kwaye ihlala ilandelayo:
Idilesi yendawo yokuhlala
Inyathelo 3-Ukhetho lweqonga lokuthengisa
Ngoku unayo i-akhawunti kunye nomthengisi ozikhethelayo, unokwenza isigqibo sokuba leliphi iqonga elisebenza kakuhle kuwe nakwindlela yakho yokuthengisa.
Ngokubanzi, oku kuhlala kubandakanya ukukhuphela iqonga elinjengeMT4 okanye iMT5. Ukuba ukhetha ukurhweba ngesikhangeli sakho sewebhu, uya kuba nakho ukusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuthengisa.
Ukuba u do isigqibo sokukhuphela iiplatifomu zeMetaTrader (MT4 / 5) emva koko uya kuba nakho ukuzama irobhothi ezenzekelayo ye-forex!
Inyathelo 4-Qalisa ukusebenzisa iAkhawunti yeDemo
Njengokuthengisa nje kwilizwe lokwenyani ngoku ukhululekile ukuthengisa, ukuthenga kunye nokufikelela kwiimarike. Xa usenza oku, eyakho ukuthengiswa kwamaphepha Iimali ziya kuncitshiswa kwimali eseleyo yeakhawunti-iyenze ibonakale iyinyani (ngaphandle komngcipheko).
Ihlala ingumbono osengqiqweni wokugcina iso kwiinkcukacha manani zakho ngokweeodolo. Oku kuya kukunika umbono ocacileyo wokuba uhlawula njani ngokubhekisele kwilahleko kunye neenzuzo.
Ngokukodwa, oku kuya kukuxelela ukuba iindlela zakho ziyasebenza okanye hayi. Emva kwayo yonke loo nto, le yenye yeenjongo eziphambili zokuba neakhawunti yedemo!
Inyathelo 5-Guqula kwiAkhawunti yokwenyani yeBroker
Ngethemba, ngeli nqanaba, uyenzile eyona akhawunti yakho yedemo, kwaye neendlela zakho zokurhweba ziye kwi 't'. Ukuba oku kuvakala njengokulungileyo kwaye uziva uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungabhabha isidleke sedemo kwaye uvule iakhawunti kunye nomthengisi opheleleyo we-forex, oku kunokuba lula ukwenza.
Ukucinga ukuba ubambekile kumthengisi oye kuye xa uvula iakhawunti yeedemo, amathuba okuba sele ulibonisile uninzi lolwazi olufuna ukuseta iakhawunti esemgangathweni. Ngoku kuya kufuneka ubonelele ngesazisi sefoto kunye nobungqina bedilesi (oku kuhlala kungumthetho osetyenziswayo okanye ingxelo yebhanki).
Akukho ndlela yokujikeleza eli candelo lenkqubo yokutyikitya, njengoko kuyimfuneko esemthethweni kwidabi lokulwa imali ngokungekho mthethweni, kwaye bonke abarhwebi kufuneka bathobele le mithetho.
Ngoku, konke okufuneka ukwenze kukufaka indlela yakho yokuhlawula oyikhethileyo kwiwebhusayithi yomrhwebi, kwaye ubeke imali ethile kurhwebo kwiakhawunti yakho. Ezona ndlela ziqhelekileyo zokuhlawula ziya kuba zii-e-wallets (ezinjengePaypal ukubala enye), iiakhawunti zebhanki kunye neebhanki / amakhadi etyala.
Voila! Ngoku ungaqala ukurhweba kwiimarike zehlabathi zokwenyani. Khawukhumbule nje, unokufuna ukuhambisa umoya kwicala lokulumkisa ngokuqala ngezibonda ezincinci.
IiAkhawunti zeDemo eziPhambili ze2022 kwiXNUMX
Uninzi lwabathengi be-intanethi kwi-intanethi ngoku banikela ngeakhawunti yeedemo yohlobo oluthile. Kananjalo, oku kunokwenza ukuba kube nzima ukwazi ukuba leliphi iqonga onokuthi ubhalise ngalo.
Ukunceda ukucoca inkungu, apha ngezantsi sidwelisa ezinye zeyona akhawunti yeedemo ye-forex kwi2021.
I-AVATrade lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukusebenzisa iakhawunti yakho yedemo ngeMT4. Kukwimeko efanayo ukuba ucwangcisa ukufaka iirobhothi ezenzekelayo ze-forex, kuba oku kuyahambelana ngokupheleleyo ne-AVATrade. Iqonga libonelela ngezixhobo ezininzi zokufunda kwitshathi, kwaye unokufikelela kwezinye izixhobo zeCFD ezinje ngestokhwe, ii-indices kunye nezinto zorhwebo.
Iiakhawunti zeedemo ze-forex ezilungileyo zikuvumela ukuba ube namava eemarike zehlabathi zokwenyani ngaphandle kokubeka emngciphekweni eyakho imali. Oku kufanelekile ukuba usaqala, njengoko ikuvumela ukuba ufunde iintambo zokuthenga kunye nokuthengisa izibini ze-forex ngendlela engenabungozi. Kwesinye isiphelo sebala, ezona akhawunti zibalaseleyo zedemo ye-forex ivumela abathengisi abanamava ukuba bavavanye kwaye bagqibelele ngeendlela ezintsha ngaphandle kokubeka imali yelizwe lokwenyani emgceni.
Ekugqibeleni, iiakhawunti zedemo ye-forex zikuvumela ukuba uziqhelanise namaxabiso entengiso asoloko etshintsha, iitshathi, kunye nezixhobo zolawulo lomngcipheko- zonke ezi zifuna izakhono ukuze ube ngumrhwebi omkhulu.
Iakhawunti yeedemo ye-Forex ikuvumela ukuba urhwebe ngababini be-forex ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali. Endaweni yoko, uya kuthengisa ngemali yephepha.
Ngubani onika iiakhawunti zedemo ye-forex?
Ukuze usebenzise iakhawunti yedemo ye-forex, kuyakufuneka uvule iakhawunti kunye nomthengisi oqhelekileyo kwi-Intanethi. Nje ukuba wenze, emva koko ungasebenzisa indawo yeakhawunti yomthengisi.
Ngaba unokwenza imali kwiakhawunti yedemo ye-forex
Hayi, urhwebo ngalunye olufumanayo lusekwe kwimali yeakhawunti yedemo. Kananjalo, awukwazi ukwenza nayiphi na imali kwiakhawunti yedemo ye-forex!
Ngaba kufuneka ndikhuphele isoftware ukuze ndisebenzise iakhawunti yedemo ye-forex?
Ngokwesiqhelo akunyanzelekanga ukuba ukhuphele nayiphi na isoftware, njengoko uninzi lwabarhwebi lubonelela ngeqonga lokurhweba ngewebhu. Ngale nto ithethwayo, ukuba usebenzisa umrhwebi oxhasa iMT4 / 5, uya kuba nokukhetha ukukhuphela isoftware kwisixhobo sedesktop.
Iza malini iakhawunti yedemo ye-forex exhaswa ngemali?
Oku kuya kwahluka kubarhwebi nabarhwebi. Umzekelo, i-eToro ibonelela nge- $ 100,000 kwiimali zamaphepha, ngelixa abanye abarhwebi benikezela kancinci kakhulu.
Ngaba iakhawunti yedemo yeakhawunti yorhwebo kwiimeko zentengiso ezihleliyo?
Iiakhawunti zeedemo ze-forex ezilungileyo zikuvumela ukuba uthengise kwiimeko zentengiso ebukhoma. Oku kuqinisekisa ukuba uyakwazi ukufunda iintambo zorhwebo lwe-forex ngendlela efanelekileyo.
Ndingalisebenzisa ixesha elingakanani iakhawunti yedemo ye-forex?
Ezinye iiakhawunti zedemo ye-forex zikhawulelwe kwixesha elimiselweyo ngaphambi kokuba imali irhoxiswe. Nangona kunjalo, abanye abathengisi bayakuvumela ukuba usebenzise indawo yabo yeakhawunti yeedemo okoko ufuna. Ekugqibeleni, oku kukukhetha komthengisi wakho omkhethileyo.